I-HUAWEI Watch 3, eneHarmonyOS isithenjwa sewatchwatch | Izindaba zegajethi
I-HUAWEI Watch 3, eneHarmonyOS yi-smartwatch yesethenjwa
UMiguel Hernandez | 26/06/2021 20:04 | Kubuyekezwe ku- 26/06/2021 20:56 | Amadivayisi agqokekayo, Gadgets, SmartWatch
Sekuyisikhathi manje asilethi iwashi elihlakaniphile kwiwebhusayithi yethu, ngakho-ke namuhla wusuku oluhle lokukukhapha ngokuhlaziywa kwe-smartwatch yakamuva futhi enobuhlakani obukhulu emakethe, iHuawei Watch 3, eletha okungaphezulu kakhulu kwehardware kanye design High-end, ihambisana neHarmony OS 2.0, uhlelo olusebenzayo uHuawei afuna ukuzihlukanisa nalo kuGoogle.
Angiqiniseki neze, ngakho-ke sijoyine kulokhu kubuyekeza.
Okokuqala futhi cishe njalo, siyakukhumbuza ukuthi sinokuhlaziywa kwamavidiyo esiteshini sethu YouTube, ngakho-ke ungaphuthelwa yithuba lokubhalisa futhi ubheke lokhu kubuyekezwa cishe kwesigamu sehora lapho ungaphuthelwa khona imininingwane.
Uma uyithandile, ithenge ngentengo engcono> THOLA
1 Idizayini: I-premium eningi, iHuawei eyengeziwe
2 Izingxenyekazi zekhompuyutha nesoftware, iHarmonyOS iyisicup ikhekhe
3 Isikrini nokuxhuma, akukho okushodayo
4 Izinzwa yonke indawo nokuqeqeshwa okuningi
Idizayini: I-premium eningi, iHuawei eyengeziwe
Idivayisi inokunye ukwakheka okuyindilinga okuvele kukhona okuhlinzekwa yi-Apple. I-smartwatch sikaHuawei siyindilinga ngokuphelele futhi Inobukhulu obungu-46,2 x 46,2 x 12 millimeters obumangaze ngosayizi wabo omkhulu, okuthile okungajwayelekile kulolu hlobo lwewashi. Lokhu kuyamangaza, kepha singasho ukuthi akusenzi sibe "sikhulu ngokweqile".
Ungayithenga ngentengo engcono ku-Amazon
Ngokwengxenye yalo, iwashi linechassis yensimbi emnyama ngokuphelele kuhlobo esiluhlolile nebhande le-silicone. Siyakhumbula ukuthi iHuawei izokwethula nohlobo olwakhiwe ngokuphelele ku-titanium, ngentambo ngemigomo efanayo futhi singathenga amabhande ahlukahlukene ngohlelo lokuvalwa olulula ezindaweni ezijwayelekile zokuthengisa. Ngokwesisindo, amagremu angama-52 kuphela, isimanga se-Huawei Watch 3 ngokukhanya kwayo. Ukwakhiwa kuhle kakhulu, kuyezwakala premium ngendlela efanayo nokuthi isisekelo senziwe ngento ecwebezelayo epulasitiki / ye-ceramic. Akuthathi ukwelashwa okuningi ukubona ukuthi umkhiqizo ophezulu.
Izingxenyekazi zekhompuyutha nesoftware, iHarmonyOS iyisicup ikhekhe
Ukwenza imisebenzi ejwayelekile, inkampani yase-Asia inqume ukusetha iprosesa yayo, i-HiSilicon Hi6262, Ngakho-ke kule nguqulo ayikhwebi amaprosesa asuka kububanzi beKirin, okungalawo madivayisi adinga amandla aphezulu. Sine-2 GB ye-RAM ukuphelezela iprosesa ngisho 16 GB wesitoreji inani lazo zombili izinhlelo zokusebenza nokuqukethwe okubukwayo okuhambisanayo.
Umsebenzi wokukhipha amanzi
Ukumelana kuze kufike ku-5 ATM
Uhlelo Lokusebenza lwaleli jewel esihlakaleni IHarmonyOS 2.0, idivayisi yokuqala ye-Huawei enalesi simiso esifinyelela umphakathi jikelele. Umuzwa wethu ugqamile IHarmonyOS ihamba kahle futhi asizange sihlangabezane nokungasebenzi kahle - empeleni, iphikisana nomncintiswano ngqo, ngamazinga wejubane aphezulu kunezinye izindlela ze-Wear OS nezakwa-Samsung. Inegalari yohlelo lokusebenza lwe-Huawei yeWatch, ngeshwa asitholanga uhlelo lokusebenza olukhanga ngokwanele ukusizakala ngalo msebenzi. Noma kunjalo, izinhlelo zokusebenza ezifakwe ngokwendabuko zibonakale zingaphezu kokwanele, kanye nokuhlanganiswa kwayo nohlelo lokusebenza lweHuawei Health esikuncomayo ukulifaka kugalari yohlelo lokusebenza.
Isikrini nokuxhuma, akukho okushodayo
Sinephaneli evelele AMOLED angu-1,43-intshi enikezela inani eliphelele le- 466 x 466 Amaphikseli, ngomphumela sinawo Amaphikseli angama-326 nge-intshi ngayinye. Ukunikezwa ngezinga lesiphuzo esithambile se- 60 Hz, okungaphezu kokwanele kwesikrini sokubuka esihlakaniphile. Ikakhulu kugqamisa iqiniso lokuthi sinesilinganiso esiphezulu se- Izinombolo eziyi-1.000 XNUMX zokukhanya, okuthile okubonakala ngaphandle ngaphandle lapho singasebenzisa khona kakhulu lo mthamo ngoba ukusetshenziswa kwawo emini libalele futhi kuphakeme, ngaphandle kokucabanga noma uhlobo oluthile lwenkinga olususelwe kuwo.
Mayelana nokuxhuma, sinokuxhumana 4G nge-eSIM, okwamanje ehambelana kuphela nezinguqulo ze- IMovistar ne-O2, ukuphakamisa ezinye izinkinga nge-Orange, Vodafone nezinye izinto. Nathi sinawo I-NFC Yize singakakwazi ukukhokha ngoba iHuawei isasebenza ngezivumelwano nezindlela zokukhokha. Ngabe I-Bluetooth 5.2 ne-WiFi 802.11n kukho konke ukuxhumana, okuthile okuzosivumela ukunethezeka kokungaphuthelwa lutho.
Izinzwa yonke indawo nokuqeqeshwa okuningi
Sinayo yonke le mali enkulu kangaka yezinzwa, ngakho-ke siyangabaza ukuthi uyakwazi ukwenza noma yimuphi umsebenzi le-Huawei Watch 3 engakwazi ukulinganisa:
Inzwa yokushaya kwenhliziyo
Inzwa yokugcwalisa i-oxygen oxygen
Okwamanje i-thermometer ikwazi kuphela ukukala izinga lokushisa kwesikhumba, kepha phakathi nenyanga kaJulayi sizothola isibuyekezo esizosivumela ukuthi silinganise ukushisa komzimba. I-barometer inembile kakhulu futhi kwenzeka okufanayo nangezinye izinzwa uHuawei asebenza ngazo Isivele ikubonakalisile ukusebenza kwayo ezinhlelweni zangaphambilini zamawashi ayo ahlakaniphile.
Ngokuqondene nokuqeqeshwa sinezinguqulo ezihlukene ezingaphezu kwezingu-100, lokho kuzosinikeza imiphumela ethembekile kuhlelo lokusebenza lweHuawei Health. Le yiwashi elihlakaniphile lenkampani elinobubanzi obubanzi kakhulu bamathuba kulokhu.
Ukuzimela okuthenjisiwe kwedivayisi kuyizinsuku lapho wonke amandla esebenze futhi kufika ezinsukwini eziyi-14 uma siya kwimodi yokonga amandla. Ekuvivinyweni kwethu sithole izinsuku ezi-2 zokusetshenziswa okuphezulu futhi ezinsukwini eziyi-12 ezizosinikeza ezingeni lokonga amandla, U-Huawei usithembisa ukuthi ekuvuseleleni okulandelayo sizothola imiphumela ethenjiswe ngumkhiqizo.
Le Huawei Watch 3 ibukeka njengesivivinyo sokuqala seHarmonyOS litmus futhi okwamanje seyedlule kude, ngokuthembeka, ulwazi lomsebenzisi lungcono kunolo lwezinguqulo eziningi zangaphambilini ze-Apple Watch futhi luphakeme kakhulu kune-Wear OS. Akungabazeki ukuthi iwashi lama-euro angama-369 (ngeFreeBuds 3 njengesipho) elihlala ezingeni eliphakeme kakhulu libekwe njengenguqulo ehlakaniphe kakhulu ngokombono wami we-Android.
Isilinganiso sezinkanyezi esingu-5
Kuthunyelwe ku: 26 Juni ka-2021
Ukulungiswa kokugcina: 26 Juni ka-2021
Idizayini yokuqala nezinto zokwakha
IHarmonyOS ikhombise amandla kanokusho nokushelela
Akukho okushodayo ezingeni lehadiwe
Igalari Yohlelo Lokusebenza idinga utshalomali oluningi
Ukuzimela akukafiki lokho okwakuthenjiswa
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » I-HUAWEI Watch 3, eneHarmonyOS yi-smartwatch yesethenjwa
I-Realme TechLife Robot Vacuum, i-vacuum vacuum enekhwalithi / intengo enhle kakhulu
Sebenzisa lawa madili amahle emikhiqizweni ye-Oclean yokuxubha ngobuchwepheshe